Nhau - Tianhai Cryogenic (BTCE) yakatanga zvakare kutumira kunze kwenyika kweLNG marine tank tank chirongwa
Tianhai Cryogenic (BTCE) yakatanga zvakare kutumira kunze kweLNG marine tank tank project
Musi wa30 Mbudzi 2019, Tianhai Cryogenic akasaina odha nyowani yemakumi mashanu cubic metres ekunze LNG matangi emugungwa. Iri LNG tangi remugungwa rinoshandiswa mune 2 * 1500Kw port tugboat chirongwa muSingapore.
Zvinoenderana nezvinodiwa zvepurojekiti, chimiro cheiyi 50 li LNG marine tank yakakosha zvakanyanya. Iyo tangi yekuchengetedza inogadzirwa nekaviri-layer simbi isina tsvina, uye reshiyo yedhayamita kusvika kureba ndeye 1.3. Yakaongororwa neABS Classification Society. Ndiyo yekutanga yakamira tangi yekuchengetera kuiswa mudura replywood. Mapurojekiti, dhizaini, uye kugadzira zvese zvakaoma kwazvo. Tichivimba neruzivo rwayo rwakapfuma mukugadzira nekugadzira matangi emugungwa, Tianhai Cryogenic yakaita mhinduro dzakawanda dzehunyanzvi nevatengi, uye pakupedzisira vakagamuchira iyi LNG marine tank order, iyo zvakare inoratidza simba rakasimba reTianhai Cryogenic mukugadzira nekugadzira LNG marine. matangi.
Sebhizinesi rehurumende rekugadzira, Beijing Tianhai Cryogenic Equipment Co., Ltd. yanga ichiomerera kune yakakosha kukosha kwe "Tianhai Cryogenic Champion Quality" uye yakazvipira kuve inotungamira pasirese-yakaderera-tembiricha yekuchengetedza uye yekufambisa yekugadzira uye sevhisi kambani. . Iyo kambani yave ichiita dhizaini nekuvandudza LNG marine tank zvigadzirwa kubva 2009. Nyanzvi uye mapurofesa anga achishanda muindasitiri kwemakore gumi-15 akaumba LNG marine tank dhizaini uye timu yekuvandudza.
Kubva pakashandurwa chikepe chePetroChina chekutanga cheLNG-powered muna 2010, kambani yakawana zvibvumirano zvefekitori kubva kuCCS, BV neABS classification societies, uye zvigadzirwa zvese kubva pa3 cubic metres kusvika pa300 cubic metres zvakawana CCS, BV, ABS neDNV. Uye mamwe maclassification sosaiti chigadzirwa chitupa. Panguva imwecheteyo, kambani yakawanawo manejimendi system certification senge ISO9001, ISO14001 uye OHSAS18001.
Beijing Tianhai Cryogenic Equipment Co., Ltd. yave mugadziri wepasirese anoshanda mukugadzirwa kwemweya wakakura wakaita liquefied, liquefied natural gas (LNG), liquid carbon dioxide uye imwe cryogenic kuchengetedza uye zvekufambisa. Zvigadzirwa zvinosanganisirawo akasiyana zvirevo zve cryogenic tank midziyo uye LNG ngarava. Isu tine hupfumi hwekugadzira uye ruzivo rwekugadzira mukuunza kwakawanda kwemidziyo yetangi uye dhizaini nekugadzira matangi emugungwa. Tinogona kugadzirisa hunyanzvi hwekugadzirisa zvigadziriso kwauri zvinoenderana neyakasiyana-siyana zvinodiwa nevatengi. Parizvino, kugona kwegore rekugadzira kweTianhai yakaderera tembiricha inogona kuwana anopfuura 2500 ekuchengetedza matangi eakasiyana zvirevo. Ichishandisa advanced otomatiki midziyo, inogona kugadzira uye kugadzira zvigadzirwa zvakasiyana zvinosangana nemamiriro epamba uye ekunze. Hunhu hwacho ndehwepamusoro-soro uye hwakavimbika.